A cameo wuxuu sameeyaa marxalad weyn
Soo saarida alaabta guriga ama armaajooyinka, runti qalabka rakibku wuxuu hayaa kharashkiisa kaliya 5% -10%. Laakiin joogsiga ama hoos u dhaca tayada alaabta guriga ama armaajooyinka, dareenka ugu dareenka badan waa jilicsanaanta bogagga khaanadaha, beddelka albaabka golaha iyo haddii uu aamusnaado, qayb kasta oo shaqo ha ahaato bini'aadam n ...
Macaamiisha qaar waxay i weydiisteen sida loo doorto qaanadda saxda ee hoose ee dhajinta? Maanta waxaan soo bandhigi doonaa noocyada hoose ee dhalada aan ku leenahay. Qalabka Geriss wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo ah bogagagga khaanadaha qarsoon. Faahfaahinta waxaad ku booqan kartaa https: //www.yangli-sh.co ...
GERISS Nidaamka khaanadda sanduuqa khafiifka ah ee gidaarka laba-geesoodka ah, ha lagugu siiyo karti heer sare ah xagga jikada!
Horumarinta xilliyada, dadku waxay leeyihiin shuruudo sare iyo sare oo loogu talagalay armaajooyinka jikada. Qeyb ka mid ah kabadhada jikada ee wanaagsan, qalabku waa qayb lama huraan ah. GERISS HARDWARE waa soo saare xirfadlayaal Shiineys ah oo ka kooban qalabka jikada. Maanta waxaan ka hadli doonnaa sababta aad u shou ...
Wasaaradda ilaalinta deegaanka ayaa si rasmi ah u hirgelisay heerarka cusub ee ilaalinta deegaanka ee qalabka guryaha
1dii Febraayo, Wasaaradda ilaalinta deegaanka ayaa soo saartay "shuruudaha farsamo ee alaabta alaabada lagu calaamadeeyo ee deegaanka (HJ 2547-2016)" si rasmi ah ayaa loo hirgeliyay, iyo "alaabta farsamada looga baahan yahay alaabada sumadda deegaanka" (HJ / T 303-2006 ...
Sida Loo Xullo Slide Dhalinta Kubbadda Wanaagsan
Dhawaan, asxaabta qaar qurxinta guriga, waxay i weydiisteen inaan iibsado kuwa guryaha jiida si aan ugu fiirsado dhinacyadaas. Hadda waxaan kula wadaagayaa waaya-aragnimadayda adiga: xulashada boodhka xambaarsan kubbadda waxay noqon kartaa iyada oo loo marayo tijaabooyinka soo socda si loo doorto kanaal telescopic bir ah oo tayo fiican leh: 1. ...
Nooca Iskuduwaha Isweydaarsiga Nooca Go'aanso haddii aad rabto dhinac-dhejin, buur dhexda ama bogagga hoose ee hoose. Inta ay le’eg tahay inta u dhexeysa sanduuqaaga khaanadda iyo furitaanka golaha wasiiradda ayaa saameyn ku yeelan doona go’aankaaga. Bogagga-ku-qulqulka waxaa loo iibiyaa laba-labo ama xirmooyin, iyadoo lagu dhajinayo dhinac dhinac oo khaanadda. La heli karo ...